Rasaasa News – Los Angeles: Safaarada Atobiya oo Shir u Qabtay Somalida
on February 20, 2014 12:31 pm
Jijiga, February 20, 2014 – Wararka ka imanaya magaalada Los Angeles, ayaa sheegay in todobaadkan dhexdiisa lagu qabtay magaalada Los Angeles shir lacag loogu yaboohayey biya xidheenka Abay.
Shirka waxaa ka soo qayb galay Somalida degan magaalada Los Angeles iyo Seattle. Masuuliyiinta safaarada Atobiya ee shirka yabooha joogay, waxaa ka mid ahaa labo haween oo ka shaqeeya safaarada Wayzerro Fikirte iyo Mebret Bayena iyo nin u qaabilsan safaarada yabooha biyo xidheenka Abbay Zawde Abaraha. Waxaa kale oo kulanka joogay ninka u qaabilsan jaaliyada safaarada Atobiya arimaha Somalida Xabiib Muxumed Yusuf Habane.
Shacabka Somalida ee qurbaha jooga ayay Atobiya si wayn ugu xisaabtantaa jeebkooda kolka ay timaado yabooha mashaariicda Atobiya.
Waxaa iswaydiin mudan sababta safaaradaha Atoobiya shirarka ay dibada ku qabtaan loogu beegsado dadka Somalida kaliya, maadaama ay dad badan oo asal Atoobiyan a degan yihiin dalalka dibada? Jawaabta meel dheer ha u doonin waa cabsi kaliya.
Waxaa kale oo iswaydiin mudan qurbo joogta Somalidu la xaquuq ma yihiin qurbo joogta Atobiya? Maya nooc walba oo Somali tahay, ma helaan xuquuqda ay Atoobiya ku leeyihiin, kamana doonayaan in ay xuquuq ka helaan. [tusaale, waxaa dhawaan Addis Abab laga hirgaliyey 5,500 guri oo si casri ah loo dhisayo, looguna talo galay qurbo joogta Atobiya, waxaa ka qayb galay hal wiil oo Somali ah]
Dadka Somalida ah ee degan dibadaha ayaa kuligood waxay ku liistaysan yihiin inay asal ahaan ka yimaadeen dalka Somaliya. Hadana kolka ay noqoto waxtar, gabalka Ogaden ka ku dhashay, iyo ka Muqdishu iyo Hargaysa ku dhashayba way ka siman yihiin tagaabada Atobiya, tolow arintani maxay tahay? Jawaabtu waa Cabsi!